थ्रीजी महाराजकी जय! - Himalkhabar.com
ब्लगबुधबार, साउन २०, २०७२
स्वामीले दह्रै जोते। लंगुर माफिक बुर्कुसी मार्दै आइपुगेका एक माननीयले साष्टाङ्ग दण्डवत्मा स्वामीभक्तिको ‘डेमो’ देखाउँदा मलाई खुस्कुँला कि जस्तो भयो।
भारतवर्षमा अचेल स्वामीहरूको गतिलै चहलपहल छ। जोसुकै चण्डालले पन्डाल टाँगेर प्रवचन दिन थाले’सि मन्त्रमुग्ध भई सुन्नेहरूको कौनो कमी हुन्न।
जीवनमा तरक्की गर्ने लालसाले पत्नी/प्रेमिका त्यागेका (नत्यागेका र पत्नी/प्रेमिका गोप्य राखेका पनि छन्) यस्ता चण्डालहरूप्रति लक्ष्मीमाताको उस्तै अनुकम्पा देखिन्छ।
मोबाइल थिचेको भरमा ऐश्वर्यको रास लगाउने यस्ता बाबाहरू लोकको कष्ट हरणका लागि आफूले यो दुःख उठाएको बताउँछन् र त्यसलाई पत्याउने भक्तहरूको भीड तयार हुन्छ। तिनले त्यो धनविज्ञानै बताइदिए लोकले आफ्नो कल्याण आफैं गर्दो हो!
योग–साधनामा तल्लीन हुनेहरू साधु/सन्त कहलिन्छन्, पत्रकार सम्मेलन गर्ने स्वामीजीको रुचि चाहिं सरकारी तथा सामुदायिक जमीनमा भोगाधिकार कायम गर्नेमा रहेछ।
यिनको इशारामा मन्त्रीहरू राज्यको ढिकुरो फोर्न तुलबुलाउँदारहेछन्, अदुवा अड्डाका जिम्मुवाल हिसाब मिलान गर्न उत्सुक हुँदारहेछन्। स्वामीजीको महिमा सुनेर म पनि तुल्बुलिंदै राष्ट्रिय निकुन्जमा निर्मित राजसी गोल दरबारमा पुगें।
उहिले ठूला साधुसन्तहरू वनको कुटीमा बस्थे रे, अहिलेका स्वामीजी जङ्गलमा पृथ्वीतलको सबै सुखसुविधा र सुरक्षा भएको महल बनाएर बसेका रहेछन्।
पाँचसितारा आश्रमको चकाचौंधले तिलमिलाएको आँखा मिच्दै गर्दा मेरो मनमा झवास्स् झ्स्कना पस्यो– निकुन्जको जमीनमा भोगाधिकारको बलठेल गर्दा दुनियाँले भोगी भएको आरोप लाउन्नन्?
“त्यसो’भे त कालापानी, लिपुलेकतिर पनि विस्तार हुनुपर्‍यो स्वामीजी”, म उत्साहित भएँ।
अनि मेरो भेजामा पनि बिजुली चम्क्यो। ठिङ्ग उभिएर विचारें– आचार, विचार, व्यवहार र समृद्धिको रफ्तार समेतलाई हेर्दा स्वामीजी थ्रीजी महाराज हुनुहुँदोरहेछ– उत्तरआधुनिक साधु।
स्मार्टफोनको सफ्टवेयरमा दैनिक अपलोड–डाउनलोड दनक दिने ऋषि संस्कृतिको मोर्डन भर्सन। दिनहुँ नेतालाई बोकेर समाजलाई टोक्नु यो भर्सनका स्वामीको विशेषता हुन्छ। पुरानो नेपालमा हामीलाई खप्तडबाबा, शिवपुरीबाबा, बालगुरु षडानन्द आदिले धर्मको अर्थ र विचारको विज्ञान बताए।
नयाँ नेपालले पनि केही थान हाइटेक बाबा जन्माउन सक्नु गौरवकै बात हो। नत्र त, देशको अनुहारमा धब्बै लागेर मर्थ्यो। यो त चानचुने उपलब्धि होइन नि! यसरी पुलकित हुँदा पर पुगिसकेको विचरा म एक्लै कराएँ, “थ्रीजी महाराजकी…”